Nwaanyị n'ike n'ike: nna ya katọrọ ya "Nwa m nwanyị bụ onye mmanya na-egbu" | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Mina Del Nunzio - Eprel 30, 2021
Nwa nwanyi n'ike n'ike: nna "Nwa m nwanyị wasụbigara mmanya ókè”Nke a mere na Campobello dị na mpaghara Trapani. Otu nwatakịrị nwanyị dị afọ 18, nke ngwugwu ahụ dinara n'ike, o doro anya na mmanya na-egbu ya mgbe e dinara ya n'ike. Enwere ụmụ nwoke 4 ndị ejidere ụnyaahụ, maka ebubo ime ihe ike mmekọahụ megide 18 afọ. Mana ihe juru anyị anya bụ nnabata nna ahụ na ndị nta akụkọ. "Nwa m nwanyị wasụbigara mmanya ókè, ndị ahụ bụ ezigbo ụmụ okorobịa ".
Nwaanyị n'ike n'ike: nna "Nwa m nwanyị drunkụbigara mmanya oke": ihe na-eme eme
Nwa agbọghọ n'ike: papa m "Nwa m nwanyị a drunkụrụma": ihe omimi nke eziokwu. Otu akụkọ banyere ime ihe ike mere na obodo a bụ Sicily na-ekpo ọkụ. Ebe umu nwoke 4 dinara enyi ha enyi n’abali February gara aga. Mụ nwoke ahụ nọ n’agbata afọ 20 na 25. ọbụghị naanị! n'aka nke ha dinara nwa agbọghọ ahụ n'ike ma metọọ ya, ma na-ese foto ma na-ese foto ọrụ nka. Ihe na-abụghị ihe ọhụrụ na obodo anyị mara mma, ya bụ, e nweela ụdị ihe ike ndị ọzọ mere n’etiti ndị ọgbọ n’oge gara aga.
N'ime ihe a niile, enwere ihe na-anaghị aga n'ụzọ ziri ezi: anyị ghọtara ihe ọ bụ. O doro anya na nna nke Nwa nwanyi Trapani ekwetaghị nwa nwanyị ahụ toto. Ya mere, ọ gbara ọsọ na ọdụ carabiniere, na-arụ ụka na mgbagha na nwa ya nwanyị n'oge mkpesa ahụ agwaghị eziokwu niile. O gosipụtara na nwa nwanyị ahụ n'oge a dinara ya n'ike, ọ naghị egbu mmụọ iji gwa eziokwu nke eziokwu. Ọ na-agbakwụnye na ọ maara ụmụ okorobịa ahụ nke ọma, si otú a na-akọwa ha dị ka ezigbo ụmụ nwoke nwere ike ime ihe a niile.
Nwa agbọghọ n'ike: nwughari
Nwa agbọghọ n'ike: nwughari. O yiri ka n'ime mkpọ ahụ, nwa nwoke nke ise ka na-agbasaghị. Ma gịnị mere n'abalị ahụ? Ebee ka ọ mere? Akpọrọ nwa agbọghọ ahụ n'ụlọ na-adịghị anya site na ụlọ ya, ka ya na ndị enyi nọrọ otu mgbede. Nwa agbọghọ ahụ dị afọ 18 nakweere ọkpụkpọ oku ma gwa ya na enwere ụmụ agbọghọ ndị ọzọ ọ maara nke ọma. Ya mere mgbede ga-adị jụụ, ndị ahụ nna ha kpọrọ ha bụ ezigbo ụmụ amaala.
Nwatakịrị nwanyị ahụ laala n'otu ụlọ elu nke ụlọ ahụ ya na otu n'ime ụmụ nwoke nọ ya, onye ọ maara ma na-abịakarị site n'oge ruo n'oge. Na mberede, ndị ọzọ apụta ụmụ nwoke abụọ nke mkpọ ndị na-akparị 18 afọ site n'ike ya, ebe atọ ndị ọzọ nọ n'ọnụ ụzọ, na-achị ọchị, ebe nwa agbọghọ ahụ rịọrọ ha ka ha kwụsị: "M Anọ m na-arịọ maka enyemaka, m na-anwa ịhapụ onwe mm akụkọ dị egwu nke nwa agbọghọ ahụ na-atụ egwu ogwe aka m, m kụrụ isi m na mgbidi. C.Arịrịọ m enyemaka, ma ọ dịghị onye nyeere m aka ”.
N'ikpeazụ, ha kpọgara nne na nna ya n'ụlọ, ọ kọọrọ nwanne ya nwoke ihe niile soro ya gaa ndị uwe ojii. Ma carabinieri gakwara na 4 ezigbo ụmụ okorobịa, ndị gbachitere onwe ha site n'ikwu na nwa agbọghọ ahụ gha ụgha na ha nwere ike igosipụta ihe niile. Maka na oriri na nkwari ahụ enwere ndị ọzọ dị njikere ịgba akaebe. N'ikpeazụ ha kwukwara, sị: "Nwatakịrị nwanyị ahụ na-atụba ebe niile "na" mgbede dị jụụ na-enweghị nsogbu n'ụdị ọ bụla "na n'ezie, ọ bụ nwa agbọghọ ahụ" kụrụ ụkwụ ma maa ọkpọ ".
Anyị na-ekpe ekpere maka ime ihe ike ahụ
Biko, Jehova, maka ụmụ nwanyị n'ụwa nile, ụmụ agbọghọ, ndị nọ n'afọ iri na ụma, ndị na-eto eto, ndị okenye na ndị agadi. Are dị nsọ, Onye-nwe-anyị, ị na-arụ ọrụ dị ebube: anyị na-ekpe ekpere ka ime ihe ike anụ ahụ na nke omume megide anụ ahụ, uche na mkpụrụ obi ụmụ nwanyị kwụsị. Enwere ọtụtụ ụmụ nwanyị na-ata ahụhụ, mgbere, mmegbu, mmejọ na mmechuihu kwa ụbọchị.
Mbilite n'Ọnwụ: ụmụ nwanyị bụ ndị mbụ gbara akaebe